သင့် Apple TV Remote ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ အသုံးချ | ငါက Mac ပါ
သင့်ရဲ့ Apple TV Remote ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သင်၏ Remote Control သည် Apple Remote လား Apple က TV ကို အလုပ်မလုပ်ဘူးလားမတုန့်ပြန်သင့်ဘူးလား။ ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ TV ည့်ခန်းထဲမှာ၊ Apple လိုပဲအိပ်ရာထဲမှာလဲဆက်ပြီးပျော်မွေ့နိုင်အောင်ဒီနေ့လှည့်ကွက်တချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
သင်၏ Apple TV Remote ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါ
ရက်အနည်းငယ်အကြာကငါ့အဝေးထိန်း Apple က TV ကိုအလူမီနီယံတစ်ခုသည်ရုတ်တရက်ကဲ့သို့ပင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ နှိပ်သောအခါ, LED ညွှန်ပြချက်သည်အဖြူရောင်ဖြင့်သုံးကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း iCacharro သည်တုံ့ပြန်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာခရီးကိုမသွားခင်မှာအလုပ်ဆင်းသွားတယ်။ Murcia Apple စတိုး ကိစ္စမရှိပါဘူး။
ငါ "သင်မှာကောင်းစွာရည်မှန်းသေချာအောင်အမျိုးအစားအမျိုးအစား၏အတန်ငယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်, ထိုအကြံပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှုသွားတယ် Apple က TV ကို»ပြီးတော့ဒီကိစ္စ၏အဓိကအချက်ကိုရကြပါစို့။
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ့်ဒီဖြေရှင်းချက်တွေကဘယ်အချိန်လဲ အမိန့် အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလိုသည်မှာအချက်ပြသည် Apple က TV ကို သူကမတုံ့ပြန်ဘူး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ အချက်ပြမှုမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်တခြားအရာတစ်ခုခုမလုပ်ခင်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းသည်ပိုကောင်းတယ်။
ဦး စွာကြိုးစားကြည့်ပါ Controller ကိုပြန်ချိတ်လိုက်ပါအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထို link သည်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ Apple နည်းပညာအထောက်အပံ့တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
လူမီနီယံ Apple Remote ပေါ်တွင် Menu နှင့် Right ခလုတ်များကိုခြောက်စက္ကန့်အထိဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ။
Apple Remote အဖြူရောင်ဗားရှင်းများတွင် Menu နှင့် Next / Fast Forward ခလုတ်များကိုခြောက်စက္ကန့်ဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ။
သင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှ Remote အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ဤအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည်။
၏ပင်မ menu မှ Settings> General> Remotes ကိုရွေးချယ်ပါ Apple က TV ကို.
Pair Apple Remote ကိုရွေးပါ။
Apple Remote ကိုအောင်မြင်စွာတွဲဆက်ပြီးသောအခါ Apple က TV ကို ချိတ်ဆက်လင့်ခ်သင်္ကေတကိုပြလိမ့်မည် (
) ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအိုင်ကွန်အထက်။ ပြီးတာနဲ့ချိတ်ဆက်သည် Apple က TV ကို ချိတ်ဆက် controller မှသာယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်ပညတ်တော်တို့ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။
ဒီအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ သင်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားဟာအစကအခြေအနေနဲ့အတူတူဖြစ်နေရင်၊ အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကတခြားအဝေးထိန်းတွေနဲ့အချက်ပြဖြတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီတော့အဖြေထဲမှာရှိတယ် Apple Remote ကနေ link ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ၎င်းကိုသင်အလုပ်မလုပ်သော၊ အဖြူရောင်ဖြင့်သုံးကြိမ်ခေါက်စေသောထိန်းချုပ်မှုမှပြုလုပ်နိုင်သည် Apple က TV ကို ဒါပေမယ့်အခြားဘာမျှမပါဘူး။ တနည်းကား၊ Apple မှ ၄ င်း၏နည်းပညာပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါသည်။
လူမီနီယံ Apple Remote ပေါ်တွင် Menu နှင့် Left ခလုတ်များကိုခြောက်စက္ကန့်အထိဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ။
Apple Remote အဖြူရောင်ဗားရှင်းများတွင် Menu နှင့် Previous / Back ခလုတ်များကိုခြောက်စက္ကန့်ဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ။
၏ပင်မ menu မှ Settings> General> Remotes ကိုရွေးချယ်ပါ Apple TV
Unlink ကို Apple Remote ဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
Controller မှ link ကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ၊ Apple က TV ကို သီးခြား link သင်္ကေတကိုပြလိမ့်မည် (
သင့်မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Controller အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်။
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အဝေးထိန်းသည်အလုပ်မလုပ်ဘဲနေခဲ့လျှင်၊ အကယ်၍ သင်၏ကိစ္စနှင့်မတူပါကသင်၏ Apple Remote ကိုသင်၏နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုလိမ့်မည် Apple က TV ကို။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
ဒီလှည့်ကွက်ကမင်းကိုအကျိုးပြုပြီးမင်းရဲ့ command ကိုပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤစာမူကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္inမှအကြံဥာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်သင်ခန်းစာများစွာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် လဲ tutorial။ မင်းမှာသံသယရှိတယ်ဆိုရင် လျှောက်ထားသောမေးခွန်းများ သင်၌ရှိသောမေးခွန်းများအားလုံးကိုသင်မေးမြန်းနိုင်ပြီးအခြားအသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏သံသယများကိုရှင်းလင်းနိုင်အောင်လည်းကူညီနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » သင့်ရဲ့ Apple TV Remote ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Norma Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အဝေးထိန်းခလုတ်သည်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအပေါ်မှမြှားသည်တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပန်းသီးတီဗွီတွင်သွားကြည့်။ မရပါ။ မြား၊ ညာနှင့်ဘယ်မြားများသည်သာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဟေ့၊ ငါထိန်းချုပ်တာလအတော်ကြာတယ်။ ငါစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာသွားတယ်။ ငါကငါထိန်းချုပ်မှုကိုပြောင်းသင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီနေ့ငါမင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုလာတွေ့တယ်၊ ငါနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မဝယ်စရာမလိုဘဲလုပ်နိုင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ! အလွန်အသုံးဝင်သည်
Hector quezada ဟုသူကပြောသည်
Apple TV ၏လူမီနီယံထိန်းချုပ်မှုအဆက်အသွယ်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါသလား ???
Hector Quezada အားစာပြန်ပါ
pop ဂီတ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ သင်၏အကြံဥာဏ်ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Apple စက်ရုံကိုငါတို့ ၀ င်ရောက်လာတယ်
XCOM - နို ၀ င်ဘာလက Mac အတွက်ရန်သူ Unknow 2